Hiran State - News: Meelaha ay maamulada ka jiraan ayaanu kaka kalsoonahay halka ay TFGdu joogto.
Meelaha ay maamulada ka jiraan ayaanu kaka kalsoonahay halka ay TFGdu joogto.
Somalia:(hiranstate.com)- Dhawr bilood ka hor dhegaha beesha caalamka waxaa ka dhaadhacsanaa waxkasta oo ay TFGdu u sheegto iney fuliyaan. maanta waxkasta oo ay sheegaan waxaa loo arkaa fowdo ileen aduunyadu waxey taqaan waxii aad dhahdo waan sameynayaa in la sameeyo.
Qaramada midoobay, wadamada arimaha Somaliya daneeya iyo inta amarkooda ku shaqeysa sida jaamacada carabta, African Union dhamantood waxey isku aragti ka yahiin nidaamka dowald goboleedyada in la xoojiyo kedib markii wafti ka socday qaramada midoobay oo dhawaantan safaro ku tagay Somaliland iyo Puntland qireen in meelaha ay ka taliso TFGda aan marnaba lagu aamini karin nolosha qof bini'aadam ah, halka ay sheegeen in leysku haleyn karo nabad galyada maamuladii ay booqdeen sidaasi daraadeed hadii shacabka laga saacido nidaamka maamul goboleedyada ay sahlanaaneyso in wadanku noqdo mid xasiloon.
Waxaa kale oo ay qaramada midoobay ka dhawaajisay in iyadoo la xoojinayo nidaamka maamul goboleedyada dhinaca kale ay dhacdo doorashadii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya bisha July ee inagu soo aadan. inkasta oo aan si rasmi ah walito loo shaacin halka ay ka dhaceyso doorashada maadama aan walito lagu kala adkaan dagaaalada magaalada Mogdisho oo ay adkaan doonto in ay doorasho ka dhacdo hadii xaalkeedu sidan sii ahaado, hayeeshee waxaa howsha iyo meesha ay ka dhaceyso doorashada looga fadhiyaa baarlamaanka Somaliya oo ay howshaasi tahay shaqadiisa.
Ma laga yaabaa madaxweynaha iyo R/wasaaraha oo horey u kasban waayey shacabka Somaliyeed si ay hanaanka dowladnimo u gaarsiiyaan gobolada dalka in ay ku fashilmaan mar labaad in doorashadu ayba ka dhici weyso caasimada Somaliya oo loo weeciyo degaanada xasiloon ee dalka ka jira maadama ay jiraan degaano Somaliyeed oo horey ugu guuleystay iney marti galiyaan tartankii kubada cagta gobolada Somaliya?
Arintani war bixin dheer ayaan ka soo diyaarin doonaa maalmaha inagu soo aadan
si degan ula soco siyaasadaha is diidan ee ka jira dalka Somaliya oo hada waji cusub lugaha la galay kedib markii masuuliyiintii qaranka ay kasban waayeen shacabkoodii halka ay aduunyadiina ay hada u tilmaameyso xalka meeshow ka jiro.
Shirka Kenya kama qeyb galeyno waxaa bedeli raba Mogdisho maahan meel nabdoon ee doorashada soo socota meel kale ha lagu qabto iyo wax la mid ah la soco howlaha xawaaraha ku socdo ee ay hormuudka u tahay qaramada midoobay iyo wadamada arimaha Somaliya daneeya.
Marka laga soo tago siyaasadahaan cusub ee dalka ka curtay hadane April 15, 2011 waxii ka danbeeya dalka Somaliya waxuu noqon doonaa dal shacabkiisu meeshii ay doonaanba ha ku noolaadaane mowqifkooda cadeysan doona.
· admin on April 07 2011 13:57:16 · 0 Comments · 1847 Reads ·
14,667,131 unique visits